विश्व – Himalaya Television
सन् २०३० सम्ममा विश्वमै रेविजबाट हुने मृत्यु शून्यमा झार्ने लक्ष्य (भिडियो रिपोर्टसहित)
६ मंसिर २०७८ काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०३० सम्ममा विश्वमै रेविजबाट हुने मानव मृत्यु शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपालमा पनि रेविजविरुद्धको अभियान चलिरहेको छ । त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले रेविजविरुद्धको इम्यूनोग्लोबुलिन औषधि ७ वटै प्रदेशमा...
१२ कात्तिक २०७८ काठमाडौं । विश्वमा बर्सेनि एक करोड ३० लाख व्यक्तिलाई पक्षाघात हुने गरेको पाइएको छ । विश्व पक्षाघात दिवसका अवसरमा धापासीस्थित ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा वरिष्ठ चिकित्सक एवं न्यूरोलोजिष्ट डा राजु पौडेलले विश्वमा बर्सेनि...
विश्व हात धुने दिवस नेपालमा पनि मनाइँदै
२९ असोज २०७८ काठमाडौं । ‘हाम्रो भविष्य हाम्रै हातमा छ, हामी सबै एक साथ अगाडि बढौँ’ भन्ने नाराका साथ आज विश्व हात धुने दिवस मनाइँदैछ । सन् २००८ को अक्टोबर १५ तारिखदेखि नेपालमा यो दिवस मनाउन शुरु गरिएको हो...
‘आफ्नो आँखाको माया गर’ भन्ने नाराका साथ आज विश्व दृष्टि दिवस मनाइँदै
२८ असोज २०७८ काठमाडौं । ‘आफ्नो आँखाको माया गर’ भन्ने नाराका साथ आज विश्व दृष्टि दिवस मनाइँदैछ । हरेक वर्षको अक्टोबर महिनाको दोस्रो बिहीबार विश्व दृष्टि दिवस मनाइन्छ । मानिसहरुलाई आँखाको महत्व र आँखामा के कस्तो रोग कसरी लाग्न...
आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, २५ प्रतिशत नागरिक मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा
२४ असोज २०७८ काठमाडौं । आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइँदैछ । ‘असमानता हटाउन आवश्यक छ सबैको साथ र योगदानः सुलभ, समान र उपयुक्त मानसिक स्वास्थ्य हाम्रो अभियान’ नाराका साथ यसवर्षको विश्व मानसिक स्वास्थ्य...
आज विश्व हुलाक दिवस मनाइँदै
२३ असोज २०७८ काठमाडौं । आज विश्व हुलाक दिवस, नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमसहित मनाइँदैछ । ‘पुनरुत्थानका लागि नवप्रवर्तन’ भन्ने नाराका साथ आज विश्व हुलाक दिवस मनाइँदैछ । नेपालले वि.सं. २०१३ मा विश्व हुलाक सङ्घको सदस्यता प्राप्त गरेपछि विश्व हुलाक...
विश्वका नेता र अर्बपतिहरुको गोप्य धनसम्बन्धी दस्तावेज सार्वजनिक
१८ असोज २०७८ न्युयोर्क । विश्वका नेता, राजनीतिज्ञ र अर्बपतिहरुको गोप्य धन र लेनदेन सम्बन्धि वित्तीय दस्तावेजको सबैभन्दा ठूलो चुहावट सार्वजनिक भएको छ । ३५ जना वर्तमान तथा पूर्व नेतासहित तीन सयभन्दा बढी सार्वजनिक अधिकारीको अफशोर कम्पनीमा लगानी भएको...
आज विभिन्न कार्यक्रमसहित विश्व बसोबास दिवस मनाइँदै
१८ असोज २०७८ काठमाडौं । सबैका लागि उपयुक्त आवास सुनिश्चित गर्दै दिगो शहरी विकास प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न सुरु गरिएको विश्व बसोबास दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदै छ । सन् १९८६ देखि अक्टोबर महिनाको पहिलो...
आज विश्व मुटु दिवस, नेपालमा पनि विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम गरेर मनाइँदै
१३ असोज २०७८ काठमाडौं । विश्व मुटु दिवस, आज नेपालमा पनि विविध चेतनामूलक कार्यक्रम गरेर मनाइँदैछ । नेपालको कुल जनसंख्याको २५ प्रतिशत अर्थात् करिब ७५ लाख मानिस मुटुरोगी भएको नेपाल हृदयरोग निवारण प्रतिष्ठानको अनुमान छ। पछिल्लो दुई दशकमा देशभर...
आज विश्व रेविजविरुद्धको दिवस मनाइँदै, कसरी बच्ने रेविजबाट ?
१२ असोज २०७८ काठमाडौं । आज विश्व रेविजविरुद्धको दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी नेपालमा पनि मनाइँदैछ । प्रत्येक वर्ष २८ सेप्टेम्बरका दिन यो दिवस मनाइन्छ । सरकारले “रेविजः तथ्य बुझौँ, त्रसित नहोऔँ”भन्ने नाराका साथ यस वर्षको विश्व रेविज दिवस मनाउँदैछ...